Musikana wechando: ndiani akazvinyora, ndezvei uye kuchinjika | Zvazvino Zvinyorwa
Musikana wechando harisi bhuku richangoburwa. Muchokwadi, zvakabuda mu2020 uye ikave inotengesa zvakanyanya, kungofanana nemabhuku epamberi emunyori. Kunyangwe raive richizivikanwa kare uye richirumbidzwa, bhuku iri rakatonyanya nekuda kwekuchinjika kwaro kwazvino kuita nhevedzano paNetflix, iyo inobhejera zvakare vanyori veSpanish venhepfenyuro yavo yeSpanish.
Asi chii iwe chaunofanirwa kuziva nezve Iyo Musikana Wechando? Unoziva here kuti ndiani akarinyora? Ndezvei? Kana iri rakasarudzika bhuku kana paine kuenderera? Isu tinopindura zvese, uye nezvimwe zvakawanda, pazasi.
1 Ndiani akanyora The Snow Girl?
2 Chii Chinonzi Girl Girl nezve?
3 Ndechipi genera Iyo Musikana weChando?
4 Iko kune kuenderera kwebhuku here?
5 Kune pekugara here?
Ndiani akanyora The Snow Girl?
Kana isu tichifanira kunongedzera kune 'ane mhosva' iyo The Snow Girl yakaonekwa muzvitoro zvemabhuku mu2020 saka ndizvo Javier Castillo. Ndiye munyori akazvitsaurira, sezvo ino isiri yekutanga, asi yechina. Nhoroondo dzake dzekutanga, "Zuva rakarasika pfungwa" uye "Zuva rakarasika rudo", zvakamuita kuti abudirire uye kubvira ipapo anga achibudirira neimwe yenhau dzaakaburitsa.
Asi Javier Castillo ndiani? Munyori uyu akazvarwa muMalaga muna 1987. Ruzivo rwake rwekutanga rwakanyorwa achifamba nechitima kuenda nekubva kubasa kwake (semupi wezano wezvemari) kumba kwake. Pane imwe nguva apedza, uye achifunga kuti yake nyowani yaive iri nani pane iya yakaburitswa, akafunga kunyorera kune vaparidzi kuti aedze rombo rake. Nekudaro, ivo vakazviramba, uye akafunga kuzvishambadza iye amene. Nekudaro, paakatanga kubudirira (uye isu tiri kutaura nezvekutengesa anopfuura chiuru chemabhuku pazuva paAmazon), vaparidzi vakatanga kugogodza pasuo rake.
Zvakawanda zvekuti akakwanisa kutaura basa rake semubatsiri wezvemari kushandisa nguva yake yese kunyora zvinyorwa zvitsva, achiziva kuti kubudirira kwaive naye, sezvave zvichiitika.
Chii Chinonzi Girl Girl nezve?
Musikana weChando ane zano rayo guru a chiitiko chinoitika muna 1998 uye icho chinoita hupenyu husina kunaka hwevabereki hunoshanduka zvachose. Kana mwanasikana ane makore matatu ekuzvarwa atsakatika asina kana musara, munhu wese akarasika, asingazive kwekutarisa kana kubatsira vabereki vasingawane mhinduro nezvekuti mwanasikana wavo aripi.
Kusiyana nemamwe mabhuku, muCastle iyi zvinoratidzira kuti manzwiro evaya vanhu vanobatanidzwa akaita sei, zvavanotambura uye manzwiro avanenge vakaita, chimwe chinhu icho, mumabhuku apfuura, chisina kunyatso tariswa.
Ndekupi Kiera Templeton? New York, 1998, Thanksgiving Parade. Kiera Templeton, anonyangarika mukati mevanhu. Mushure mekutsvaga kwekushamisika mukati meguta, mumwe munhu anowana tambo shomanana dzevhudzi padyo nehembe dzaive dzakapfekwa nemusikana mudiki. Muna 2003, pazuva iro Kiera angadai akasvitsa makore masere, vabereki vake, Aaron naGrace Templeton, vanogashira pasuru isingazivikanwe pamba: Tepi yeVHS ine kurekodha kweminiti-imwe kwaKiera achitamba mune imwe imba isingazivikanwe. Mushure mekutengesa anopfuura mazana matanhatu nemakumi mashanu emazana emakopi enhoroondo dzake dzekare, Javier Castillo akaisazve pfungwa dzake neThe Snow Girl, rwendo rwusviba kuenda kunzvimbo dzakadzika dzaMiren Triggs, mudzidzi wenhau anotanga kuferefeta nekuwana kuti Hupenyu hwake MaKiera akazara nezvisingazivikanwe.
Ndechipi genera Iyo Musikana weChando?
Iyo Snow Girl, senge mazhinji emabhuku aJavier Castillo, Icho chiri mukati memhando yekufungidzirwa. Ramba uchifunga kuti izvo ndezve kufumura chakavanzika, ndosaka munyori achishandisa maviri maekisheni aanopinda mukati.
Iyi nzira yekunyora ine njodzi uye vaverengi vazhinji vanotanga kekutanga vanogona kukurirwa nekuti chero panguva ipi yausingazive kana uripo, munguva yakapfuura. Asi izvi zvinongova pakutanga, paunenge usati waziva mavara; ipapo zvinhu zvinoshanduka uye avo vanokanganisa muchirevo havangokubatsire iwe kunzwisisa kuti nei ma protagonists akaita seizvi, asi iwe zvakare unoziva pakarepo nguva yakateverwa (uye pane chakavanzika mune zvese zviri zviviri).
Iko kune kuenderera kwebhuku here?
Javier Castillo munyori anowanzo kupindira mabhuku ake, kana kuita kuenderera nawo. Zvakaitika kwaari ne "Zuva iro kupenga kwakarasika", iro raifungidzira semabhuku maviri, uye mushure mekubudirira kwekutanga, haana kuzeza kudzika kubasa kuti awane chikamu chechipiri. Asi zvakadii nezveMusikana weChando? Pane chikamu chechipiri here?
Zvakanaka, munyori pachake akapindura mubvunzo uyu kubva kuvaverengi vake, kugadzirisa nyaya yacho. Uye ndezvekuti, kusiyana nemamwe mabhuku, iri kunyanya raisazove chikamu chesaga, saka tiri kutaura nezvebhuku rine mavambo nemagumo, risina zvimwe. Ehezve, pakati pemapeji ayo tinogona kuwana mavara ayo, kana iwe waverenga izvo zvakapfuura mabasa, zvinonzwika zvakanyanya kujairika kwauri. Nekudaro, neimwe nzira, kuenderera, pamwe nevamwe vatambi, vemunyori enganonyorwa dzakare.
Kune pekugara here?
Isu tinofanirwa kukuyambira kuti, sekune mamwe mabhuku, Iyo Sikana Musikana ichavewo inoenderana nemufananidzo chaiwo. Kunyanya, zvave zvakadaro Netflix anga achifarira kuwana kodzero uye kunyora akateedzana.
Kusvika parizvino, kwete zvimwe zvakawanda zvinozivikanwa nezve nhepfenyuro nyowani, asi nhau dzakabuda muna Kubvumbi 2021 uye tichifunga kuti Netflix inomhanya kwazvo pakuita sarudzo, chinhu chakachengeteka ndechekuti pamwe panosvika 2022 kana 2023 tinogona kunge tichizviona.
Pamusoro pezvo, munyori anofara kwazvo nekuti Musikana weChando haasi iye ega maratidziro emazano ake. Zvakare, mune ino kesi, kuburikidza neGlobomedia naDeAPlaneta, ivo vari kushanda pane yakateedzana iyo ichasanganisira zvinyorwa zviviri zvekutanga zvemunyori: "Zuva iro kupenga kwakarasika" uye "Zuva iro rudo rwakarasika." Hapana chinhu chinozivikanwa nezvavo kusvika parizvino, asi zvirokwazvo nhau nezvavo dzichakurumidza kusvika.
Wakaverenga here bhuku The Snow Girl? Iwe unofungei nezvazvo? Tiudze maonero ako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Musikana wechando